Indlela I-ngokuzenzakalela umhwamuko Transmittance ka Impahla Nemithi - China Wellform Impahla Group
Call Ukusekela +86 536 8513092
usekelo lwe-imeyili Wellform.Inquiry.Google@outlook.com
isikhwama sokusiza abantulayo
ephrintiwe isikhwama isikibha
ezimthende isikibha isikhwama
isikhwama isikibha abasohlwini
Drawstring Udoti Bag
Udoti isikhwama abasohlwini
Star afakwe ezimvilophini Udoti Bag
Ukudla isikhwama nokupakisha
Izithelo nemifino Bag
okubolayo yilawo manzi Bag
100% Compostable PBAT & Ummbila Starch Bag
D2W & EPI izithasiselo Degradable Bag
AGENDA DIE isikhwama isibambo
Loop isibambo sife Bag
Alahlwayo PE iphinifa
Indlela I-ngokuzenzakalela umhwamuko Transmittance ka Impahla Medical
Indlela i-ukuhlolwa umhwamuko permeability izikhwama zokwelapha
Medical izikhwama nge ukukhanya kwayo isisindo, namandla high, ukubekwa uphawu ezinhle futhi ingcindezi nokunye, kancane kancane esikhundleni yezokwelapha glass amabhodlela, is kabanzi temlomo imithi okuqinile kanye nama-liquid isigaba imithi emaphaketheni. Umhwamuko kuyisici esibalulekile ezithinta izinga nokuphepha izidakamizwa, ukuze ugweme umthelela umhwamuko izidakamizwa, izikhwama zokwelapha kufanele abe ukumelana enhle kakhulu umswakama ukuqinisekisa izinga umkhiqizo kanye nokuphepha. Kuleli phephandaba, le umhwamuko permeability test system of izikhwama yezokwelapha kafushane kwethulwa lihambisana PERME BMI W3 / 330 umhwamuko ukudluliswa izinga uhlelo test Labthink sika.
Umhwamuko ukudluliswa izinga ngokuyinhloko lisho isikhwama yezokwelapha phezu kwemihlambi, umhwamuko, umswakama ukumelana umsebenzi oluthinta ngqo izinga izidakamizwa empilweni eshalofini kwezimpahla, kodwa futhi kuyisici esibalulekile ukuhlaziywa ukuphila eshalofini. Ngemva wokuhlola angakwazi ukusingatha lo Umhwamuko uhamba ebucayi kanye nesenzakalo izidakamizwa manzi umbuzo, sikhuntile.
Labthink W3 / 330 umhwamuko uhlelo permeability test, electrolytic inzwa test isimiso, idivayisi isebenzisa ezintathu ukuhlolwa ekamelweni block ihlanganiswe ubuchwepheshe enelungelo lobunikazi, ukulawula ikhompyutha, ukuhlolwa ngokugcwele asebenzayo, clamping amasampula, chofoza ukuhlola Can ukuthatha isinyathelo ukuze uzizamele, thatha isinyathelo ukuqeda nomswakama, izinga lokushisa, ukugeleza rate nezinye izinjongo control, kwaqedwa yokulinga isinyathelo ukukhomba kanye nezitatimende daba. Insimbi ungaxhuma imishini satellite eziyisishiyagalolunye, ukuhlolwa amasampuli 30 ekupheleni, kokubili ukusebenza kwe-degree ezishintshayo, amandla ukuhlolwa, ukuhlolwa isixazululo kanye ukuhlolwa imikhawulo Usufike international level ethuthukile, futhi imigomo eminingi Futhi balondoloza ehamba phambili .
Inqubo zokuhlola simiswe ngalendlela lelandzelako: i-pre-baphathwe ibhamuza isampula ibekwe ekamelweni test, kanye nitrogen nomswakama kunesidingo iyasebenza ngaphandle iphakethe ibhamuza. I okusezingeni eliphezulu ubumsulwa nitrogen iyasebenza ngaphakathi iphakethe ibhamuza ngenxa khona umyela umswakama, ukudlula lezi zinhlayiya umusi ngokusebenzisa ifilimu kusukela ingaphandle ibhamuza ngaphakathi nitrogen ubumsulwa okusezingeni eliphezulu, eyalo nitrogen esisebenzayo inzwa, ngokusebenzisa inzwa ukukala lokuhlushwa ukuhlaziywa umhwamuko, bese ubala ukuthi permeability umhwamuko kanye nemingcele ukuze ukumelana test isampula nohlolwe.
Yiqiniso, ekuqinisekiseni wezokwelapha emaphaketheni amasaka umhwamuko ngokusebenzisa target ngemuva kokuphumelela, kodwa futhi kudingeka ezinye okuhloswe ezifana umswakama ukumelana, uphawu, njll ukulawula, ukuqinisekisa ikhwalithi yezimpahla ngesikhathi ukuphila eshalofini.
isikhathi Iposi: Jun-13-2018
Wellform Packaging Group Co., Ltd. (WPG) iye yokukhiqiza kanye ukuthengisa zonke izinhlobo zokuzivikela, nezimo emaphaketheni nowokunyathelisa imikhiqizo iminyaka.
Indlela I-ngokuzenzakalela umhwamuko Transmit ...
Kufanele nati kungalondolozwa kuphilile kanjani